A ga-ahapụ Pokémon GO Plus na Septemba 16 | Akụkọ akụrụngwa
Pokémon Go Plus ga-adị maka ịzụta na Septemba 16
Nyaahụ na isi okwu Apple, Niantic Labs, ụlọ ọrụ ahụ mara ikpe na Pokémon Go abụrụla nke ọma, were ọnọdụ ahụ gosi ngwa eji ejiji Pokémon GO Plus ga-enye gị ohere ịme ụfọdụ ụdị omume nke ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka nke nde 500 ebudatara na Playlọ Ahịa Google.
Ọnụ ọgụgụ ahụ Nde ihe nde 500 na ngwa gam akporo na ụlọ ahịa egwuregwu vidio ọ bụ ihe dị mkpa ma ụfọdụ ngwa na-ewe ọtụtụ afọ iji mee ya. Anyị nwere ike ịghọta ihe ịga nke ọma nke egwuregwu vidio a na otu Nintendo si akwadebe mwepụta nke Pokémon GO Plus ngwaọrụ a ga-anọ n'okporo ámá maka ịzụta na September 16
Ewu ewu na nke a video egwuregwu bụ ndị dị otú ahụ na ọbụna Google kwere ka onwe ya okomoko nke marking ya dị ka ihe omume na Maapụ ka "atchnweta Pokémons" ka ị nwee ike igosi ya na usoro iheomume gị.
Niantic akwadebewo akụkọ akụkọ na-atọ ụtọ nke otu ngwaọrụ Pokémon GO Plus na-apụ apụ na mmelite Buddy ọhụrụ nke ga - enyere gị aka iji Pokémon dị ka anụ ụlọ. Ngwaọrụ weara bụ ihe kachasị atụ anya maka Pokémon GO,, ebe ọ nwere ụfọdụ njirimara nke ga-enyere anyị aka ịhapụ smartphone na akpa anyị maka ụfọdụ omume.
Na Gụnyere na nkwojiaka gị ị ga-enweta vibrations na a ngosi Ikanam ga-amụnye mgbe ị nọ nso nkwụsị Poké ma ị nwere ike ịnakọta ebumnuche niile na-enweghị ịnara ekwentị gị n'akpa gị. Otu ihe a ga - eme mgbe Pokémon pụtara, ebe ọ bụ na tinyere you nwere ike ịchụ nta ya na ịpị dị mfe. Ọ bụ ezie na ngwaọrụ a agaghị enye ahụmịhe dị elu nke eziokwu, ọ nwere ike ịba uru maka nchekwa batrị.
Niantic ekwuola na Pokémon GO Plus ga-abụ dị na Septemba 16 n’ọtụtụ mba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Pokémon Go Plus ga-adị maka ịzụta na Septemba 16
Nke a bụ PlayStation 4 Pro, 4K mkpebi na ọrụ HDR
Apple na-ewebata ọgbọ nke abụọ nke Apple Watch